भोलि विहानको कोपा फाइनल फुटवल ः कसको पक्षमा हुनुहुन्छ ? व्राजिल कि अर्जेन्टिना ?
Post Date 2021-07-10 21:33:44
काठमाडौं – आइतबार बिहान नेपाली समयअनुसार पौने ६ बजे ब्राजिलविरुद्ध कोपा अमेरिकाको फाइनलमा प्रतिष्पर्धा गरिरहँदा अर्जेन्टिनाको एउटै लक्ष्य हुनेछ, ठूला प्रतियोगिताको उपाधिविहीन यात्रा २८ वर्षपछि तोड्ने।
अर्जेन्टिनाले पछिल्लो पटक सन् १९९३ मा कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको थियो। त्यसपछि उसले ठूला प्रतियोगिताको उपाधि चुम्न पाएको छैन। विश्वकपमा भने अर्जेन्टिना १९८६ मा सफल भएको थियो त्यसपछि पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा फाइनल पुगे पनि जर्मनीसँग पराजित भएको थियो। कोपा अमेरिकामा भने सन् २०१५ र २०१६ को फाइनलमा पुगेपनि दुवै पटक चिलिसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएको नमिठो इतिहास छ उसँग। पछिल्लो संस्करणमा पनि अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा पराजित भएको थियो। आजको खेलमा त्यो नमिठो इतिहासलाई बिर्सिँदै सुखद नतिजा निकाल्दै समर्थकको मुहारमा २८ वर्षपछि पुनः खुसी छर्ने अवसर अर्जेन्टिनालाई छ। तर, डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई त्यति सहजै हराउन सम्भव भने पक्कै पनि अर्जेन्टिनालाई हुने छैन। यो कुरा उसले पनि बुझेको छ। तर, अर्जेन्टिनासामू जित निकाल्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन।
आइतबारको खेलमा सबैको नजर अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीमाथि हुनेछ। मेस्सीलाई अर्जेन्टिनाको लागि आफ्नो खेल जीवनको पहिलो ठूलो उपाधि दिलाउने अवसर पनि छ। बार्सिलोनामा रहँदा उनले १० ला लिगा र चार च्याम्पियन्स लिगको ट्रफि टोलीलाई दिलाएका छन्। तर, राष्ट्रलाई ट्रफि दिलाउन उनलाई यो ठूलो अवसर छ।
६ पटक बालोनडिओर विजेता मेस्सी र उनको टोलीले अर्जेन्टिनालाई दिलाएको एउटा सफलता भनेको सन् २००८ को ओलम्पिक हो।
यता, ब्राजिलका डिफेन्डर मारक्विन्होसले भने मेस्सीलाई यो उपलब्धि हात पार्नबाट रोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अर्जेन्टिनाबाट मेस्सी १० औं ठूलो प्रतियोगिता खेल्दै छन्। उनले अर्जेन्टिनाबाट चारपटक विश्वकप खेलेका छन् भने कोपा छैटौं पटक खेल्दै छन्।
मेस्सीले जारी प्रतियोगितामा ६ खेलमा चार गोल गरिसकेका छन्। भने पाँच पटक गोलका लागि पास मिलाएका छन्।
ब्राजिलको रियो द जेनेरियोस्थित म्याराकाना स्टेडियममा हुने प्रतिष्पर्धालाई कतिपयले मेस्सी भर्सेज नेयमारका रुपमा पनि अर्थ्याएका छन्। उनीहरुबीचको साथित्व मैदानमा विपक्षीको रुपमा देख्न पाइनेछ। दुवैले बार्सिलोनाका लागि सँगै फुटबलसमेत खेलेका थिए। दुवै टोलीले हालसम्म जारी प्रतियोगितामा हार बेहोरेका छैनन्।
मेस्सी र नेयमार दुवैले जारी प्रतियोगितामा प्रभावशाली खेल प्रदर्शन गरेका छन्। तर, खेलमा देखाएको प्रभाव र महत्वका आधारमा मेस्सी केही माथि छन्। अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म जारी प्रतियोगितामा गरेको ११ गोलमा ९ मा उनकै योगदान छ। तर, नेयमारले मात्र दुई गोल गरेका छन् भने तीन पटक गोलका लागि पास उपलब्ध गराएका छन्। ब्राजिलले गरेका १२ गोलमा उनको सहयोग पाँचमा छ।
नेयमार मेस्सी एक महान फुटबलर भएको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘उनी मैले देखेकोमा एक महान फुटबल खेलाडी हुन्, मेरो साथी पनि हुन्। तर, अहिले हामी दुवै फाइनलमा छौं। प्रतिद्वन्द्वी भएका छौं। म यो ट्रफि जित्न चाहन्छु, जुन मेरा लागि पहिलो कोपा अमेरिका उपाधि हुनेछ।’
यता, मेस्सीले पनि नेयमारको साथ रहेको ब्राजिललाई हराउन निकै कठिन रहेको बताए।
मेस्सीले आफ्नो फुटबल जीवनमा हालसम्म अर्जेन्टिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफि दिलाउन सकेका छैनन्। उनले आफ्नो हालसम्मको करियरमा चारपटक ठूला प्रतियोगिताको फाइनल खेलेका छन् जसमा एक विश्वकप र तीन कोपा अमेरिका रहेको छ। आइतबारको दिन ३४ वर्षीय मेस्सीलाई यो खडेरी तोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पनि सफल बन्ने अवसर रहेको छ।...